Xasiloonida kiimikada wanaagsan, oo aan lagudaadin karin asiidhyada. Awood antioxidant xoog leh. TaC badanaa waxaa laga soosaaraa tantalum pentoxide iyo carbon black inert ama yareynta jawiga si loo soo saaro budada naxaasta ah.
dhaqdhaqaaqa dusha sare, caabbinta heerkulka sare, caabbinta qiiqa sare, xoogga sare, adkaanta sare, habdhaqanka kuleylka wanaagsan, adkaanta wanaagsan, waa meel dhalaalaysa oo muhiim ah, xoog sare iyo u adkaysiga daxalka ee qalabka qaabdhismeedka heerkulka sare, wuxuuna leeyahay nuugitaan tayo sare leh iftiinka muuqda, keydinta milicsiga iyo keydinta tamarta iyo astaamaha kale ee keydinta kuleylka. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay elektarooniga, dahaadhka, ku buufinta carbide, aerospace, tamarta atomiga, filim adag iyo qalabaynta birta iyo meelaha kale ee teknolojiyada sare ee agabyada muhiimka ah. Gaar ahaan biriijka gantaalaha, waxaa loo isticmaali karaa in lagu laabto jawiga koonkan sanka gantaal sanka
dhoobada wajiga badan ayaa ka mid ah alaabta ceeriin ee qalabka dhoobada wajiga badan leh. Qalabka dhoobada wajiga badan leh ee la soo saaro ayaa badanaa ah mid adag, dhibic dhalaalaysa, xasiloonida kiimikada ee wanaagsan iyo isdhaafsiga Waxaa loo isticmaalaa qaybaha xirashada u adkeysiga, qalabka jarista iyo elektaroolka
si ballaaran ayaa loogu isticmaalay buufinta, qalabka goynta dahaadhka, birta birta iyo alaabada ilkaha.
leeyihiin xasilloonida kiimikada wanaagsan iyo waxqabadka heerkulka sare ee loo adeegsaday filim adag, bartilmaameed, walxaha alxanka, buufinta, qalabka goynta, warshadaha birta, aerospace iyo meelaha kale. Sida dhoobada birta iyo tungsten ku saleysan carbide wakiilka turxaan bixiyaha hadhuudhka, waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa waxqabadka daawaha
Carbide Aluminium waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii wax lagu daro si kor loogu qaado awoodda saddexda alaab ee aluminiumka aasaasiga ah (al-Si-ALC, al-AlTI-ALC). Intaa waxaa sii dheer, AlC waa xarun muhiim ah oo ku taal berrinka farsamada warshadaha birta-aluminium.
Soosaarida manganese hydroxide, hydrogen iyo hydrocarbons iyo waxyaabo lagu daro macdanta metallurgy
barta dhalaalka sare, adkaanta sare, WAA sifooyinka wanaagsan ee ka hortagga-daxalka ee qalabka cusub ee shaqeynaya, waxaa si ballaaran loogu isticmaalay noocyo kala duwan oo heerkul sarreeya, xoqan iyo daxalka kiimikada iyo beero kale. Waxay leedahay qaab dhismeedka elektarooniga ah ee birta qaaliga ah iyo qaababka wax soo saarka. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay falcelinta la xiriirta haydarojiin sida isukeeniska alkane, hydrogenation hydrocarbon unsaturated, hydrodesulfurization and denitrification reactions for the super-hard tool qalabka, walxaha u adkaysta dharka, qalabka kululaynta iyo qalabka qaabdhismeedka heerkulka sare.
loo adeegsaday diyaarinta waxqabadka sare ee tikniyoolajiyadda sida carbide-ka sibidhka ah ee ashigh, aerospace, tamarta atomiga, textileelectronics, daahan, filim adag iyo qalabaynta birta. Qalabka cusub ee kaarboonomposite-ka ayaa hagaajin kara qallafsanaanta heerkulka sare ee u adkaysiga alaabteeda, adkaansho sare oo ah matolo dhalaalaya sare iyo matenals heerkulkeedu sarreeyo, matoor gantaal ah oo loo adeegsaday sidii qalabka matelida adag ee propellantrawHaixin nijaasta, waxyaabaha oksijiinta ku yar